Senkabla HDMIa Extender
Sendrata AV Sender
Senkabla IR Izolita Extender
Shenzhen PAKITE Technology Co., Ltd e tọrọ ntọala na 2008, nke bụ a n'ji ngwá electronic ngwaahịa Developer & Manufacturer na "Marketing, Development, Kwuonụ, Ịzụ, Sales, Service". PAKITE o mere ka 2.4GHz / 5.8GHz Digital STB Ikuku Ịkekọrịta Device, 2.4GHz / 5.8GHz Ikuku AV ziri ozi, Ikuku Iye Remote extender, Ikuku HDMI Video ziri ozi, Smart Control Device ..., PAKITE e lekwasịrị anya otu na-emepe emepe na ngwaahịa ọhụrụ na mụtara isi technology na àgwà akara nke na ngwaahịa site na ọtụtụ afọ 'na-emepe emepe na ìgwè. "PAKITE" Ẹda dị ka ma ama ika na Multimedia n'ji ngwaahịa ebe, nke ngwaahịa e-ere ka nile okwu na ahịa olu bụ n'elu otu.
Too ọnụ na ndị ahịa anyị na ike mmeri-mmeri ọnọdụ!
Ifịk ifịk inyocha, ike uru maka ụwa!
Ahịa mbụ, n'eziokwu, pragmatic, mwute!
Oké Ọchịchọ Mgbaru Ọsọ
Ka Pakite ibu ụwa klas nke a elu-tech oge a enterprise!
The factory bụ onye okike nke ngwaahịa ndụ. Anyị maara nke kachasi mkpa na uru nke àgwà na enterprise ndụ. Ya mere, ebe oruru nke PAKITE, anyị anọwo na-arapara n'ahụ ndị "nwere ezi obi, ndị magburu onwe, àgwà mbụ" azụmahịa na nkà ihe ọmụma. The ọrụ ebumnuche nke "na-eje ozi na obi gị, na-eme ị na-afọ ojuju n'ihu". Na otutu ohere awa site ahịa anyị, anyị hụrụ ihe karịrị afọ na anyị na-eje ozi na-kere a ọhụrụ ngwaahịa, a ọhụrụ akụkọ.
Iji izute na-eto eto ahịa ina, PAKITE nọgidere mma ya oru ike na kọwakwuru ya mmepụta bases. All ụlọ mmepụta ihe na China esoro edo àgwà ụkpụrụ ke n'ichepụta, ule na àgwà akara Filiks ma na-elekwasị anya na-aga n'ihu usoro mma. Ke adianade do, PAKITE enye ọrụ ndị dị ka mmezi aka ahịa belata n'ozuzu-akwụ ụgwọ, si otú amụba uru, n'ikpeazụ, n'ịhụ na ahịa ga-esi na ezi uche kasị nloghachi.
Anyị enwetawo dịkarịa ala, 3 quality ndenye ego n'oge mmepụta usoro iji hụ na ngwaahịa bụ na ihe ọ bụla nsogbu.
Anyị na ngwaahịa agafeela FCC, OA, RoHS na ndị ọzọ na asambodo. Izute mkpa nke kasị ngwa.
Mmepụta ụlọ ọrụ anyị na-eji na-niile environmentally friendly, na ọtụtụ n'ime anyị na mmiri nwere ike recycled.
Adreso: 12 Etaĝo, 6 Konstruaĵo, Nankeng, Wuhe Road, Longgang Distrikto, Shenzhen.